I-China Umshini Oshukumisa Umshini We-Emulsification System kanye Nomphakeli | Qiangzhong
Ucwaningo nentuthuko yethu
Kuqondile Colloid Mill JM-L
Hlukanisa i-Colloid Mill JM-F
Ovundlile Colloid Mill JM-W
Isitsha Esifudumeza Ugesi
I-Shear Ephakeme Emulsifier
I-Powder Liquid Mixer
I-Powder Turnover Bunker
Electric Heating Umshini
Ikhava Yomgodi Wenhlanzeko
Ukushisa & Ukupholisa Ithangi
I-Tank yokuxuba enodonga olulodwa
I-Magnetic Mixing Tank
Umshini Wokuxuba Umshini
Umkhakha wesiphuzo sikabhiya
Ubunjiniyela bezinto eziphilayo
Isendlalelo esisodwa sokuhlangana esivaliwe
Kuqondile eyodwa-ungqimba emulsification tank
Ingcindezi emelana nomshini wokuxuba ithangi
Iselula Pump Homogenizing nge Hopper
Ithangi Lokukhipha Ikhofi
Umshini System Eshukumisayo futhi Emulsification
Plate Heat umzimba
Inhlanzeko Engagqwali Isitoreji Tank
Isetshenziswa kabanzi ezimbonini zezindawo zokuphisa utshwala, ama-pruducts obisi, isiphuzo, amakhemikhali ansuku zonke, ama-bio-pharmaceuticals, njll.
Hlanganisa, hlakaza, emulsify, homogenize, ezokuthutha, batch ……
Min.Order Ubuningi: Izingcezu ezi-1
Amandla Wokunikezela: 50 ~ 100 Pieces Inyanga ngayinye
Uhlelo lwe-emulsification lwenzelwe ukukhiqizwa kokumiswa kwe-emulsion kwezimboni ezahlukahlukene. Kunamamodeli we-5 wokuzikhethela aqala kusuka ku-5L kuye ku-1000L, kufaka phakathi usayizi wokuhlola, ophakathi nendawo omkhulu.
Uhlelo lulula ekwakhiweni futhi lisebenza kalula, futhi wonke umshini wonga isikhala ngokuya ngokwakhiwa kokuphakama. Imishini yokuxuba esezingeni eliphakeme iqinisekisa ikhwalithi efanayo yomkhiqizo ophelile. Isebenza ngezindlela eziningi futhi ingasetshenziswa ngezinsimbi ezahlukahlukene ezinjenge-vacuum, ukufudumeza ijakhethi / ukupholisa, izivalo ezivuleke kakhulu, ukwakheka kwesampula, njll. Kwenza uhlelo lwe-SP lube yidivayisi ekahle yokucubungula uketshezi. Kuyinto nezimo design futhi kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo izimboni ezahlukene. Ingasetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-emulsion kanye nokwenziwa kwemithi embonini ye-cosmeceutical, ekukhiqizeni imayonnaise kanye nama-condiment embonini yezokudla, ekukhiqizeni ama-emulsions, ukumiswa, izingulube nezingubo embonini yamakhemikhali, njll.
Isakhiwo nokugeleza komsebenzi
Uhlelo lwangaphandle lokujikeleza kwe-homogenization luyisisekelo sohlelo. Ihlanganisa ukuhogela, ukuthutha, ukusabalalisa, nokuhlanzwa kwe-CIP online. Umklamo wepompo onezigaba ezimbili uvumela uhlelo lwe-homogenization ukuthi lunikeze hhayi kuphela amandla okuxuba okokusebenza, kepha futhi namandla okumpompa anamandla kanye nekhono lokuletha izinto ezibukeka kakhulu. Ivumela isigaba esinamanzi nesigaba sikawoyela ukuthi sithuthukiswe ngqo ohlelweni lwe-homogenization, bese sishayelwa ku-reactor ukuze siyaluzeke, ngaleyo ndlela sigweme ukukhubazeka okubangelwa inqubo ejwayelekile.
Lolu uhlelo olusebenza kahle kakhulu oluhlanganisa ukufakwa komjikelezo ophezulu, ukufana kobukhulu bezinhlayiyana zokukhiqiza kanye nokusebenza kahle kwe-emulsification. Okuqinile noketshezi kungangezwa ngqo ekhanda le-emulsification futhi kusheshe futhi kuqhume ngokuphelele futhi kuhlakazeke ukugwema ukuhlangana. Enqubeni yokuhlanza i-CIP, uhlelo lungasetshenziswa njengephampu lokudlulisa ukuhlinzeka ngomfutho ophakeme wokuhlanza uketshezi lokushintshanisa amabhola wesifutho.
Izigaba ze-emulsification nokusabalalisa zifakwa ngqo ekhanda elisebenzayo.
Umklamo we-tie rod we-modular ulungele ukugcinwa nokuhlukaniswa.
Ukusakazwa kwempahla, ukuhlanzwa kwe-CIP, akudingeki amaphampu angeziwe ukuze kukhishwe.
Ukuzikhethela kwamahhala kokuthi ngabe okokusebenza kuzodlula egumbini le-emulsification.
Imiphumela yokucubungula engcono, isikhathi esifushane sokucubungula.
Uhlelo oluyisisekelo lwe-emulsification lungahlanganiswa nama-hopper ahlukile, ophendulela ukwelashwa kwangaphambili kanye nokukhipha amathangi we-buffer ngokuya ngezidingo zokukhiqiza. Ngokusho kwendaba, kungangezwa amadivayisi ahlukene wokushisa nokupholisa. Ngisho nolayini wokusabalalisa ungadlulisa ngqo umusi ukufudumeza impahla. Kusebenza kangcono ukuphishekela kwethu njalo.
Lolu hlelo lokulawulwa kwe-elekthronikhi lungalungiswa ngokulawulwa kwezinkinobho ezilula noma ngohlelo lwe-PLC lokuthinta isikrini olunokulawulwa kweresiphi, kuya ngenketho yekhasimende. Imishini yesandla noma ezenzakalelayo ngokuphelele iyatholakala uma iceliwe.
Uma kuqhathaniswa nohlobo olufanayo lwemishini phesheya, uhlelo lwethu oluzenzakalelayo alikwazi kuphela ukuhlangabezana nezidingo zokusebenza kwekhasimende (zinganikeza izivivinyo zesistimu ezilula), kodwa futhi zinenzuzo enkulu ngokuya ngamanani, isikhathi sokulethwa kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva.
Langaphambilini Insimbi Engagqwali Ishubhu
Olandelayo: Hlunga isikhwama esisodwa
Iphampu entsha ye-Tri Stage Emulsification Pump Srh
Shear Futhi Emulsification Pump
Ipompo elilodwa le-Emulsification Pump Srh
Iphampu ye-Tri Stage Emulsification Pump Srh
Iphampu entsha ye-Tri-stage Emulsification Pump SRH
I-Tri-isigaba Emulsification Pump SRH
Isigaba esisodwa se-Emulsification Pump SRH
Iphampu ephezulu yokusika emulsification
Ikheli: No.5, Zhaoxia North Rd, Shacheng St., Wenzhou ETDZ, China
Ungacubungula kanjani upende ngeshear emul ephezulu ...
2015 Uxhaso Lwezenhlalakahle - Q ...
2015 Uxhaso Lwezenhlalakahle - E ...
2016 Uxhaso Lwezenhlalakahle - L ...
© Copyright - 2010-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe. Ukusekela kwezobuchwepheshe:
Imikhiqizo Umhlahlandlela - Imikhiqizo Okufakiwe - Amathegi ashisayo - Ibalazwe.xml - AMP Ucingo